Bit By Bit - Abuuritaanka wada shaqeyn xooggan - 5.2.3 Gunaanad
Mashaariicda xisaabinta macaamiilka ayaa isku daraya shaqada khubaro badan oo aan khibrad lahayn si ay u xalliyaan masalooyinka fudfudud-shaqada-weyn ee aan si fudud u xalin kumbuyuutarrada. Waxay isticmaalaan istaraatiijiyada isku-dhafan ee isku-dhafan si ay u jebiyaan mushkilad weyn oo ku jirta makiinooyin badan oo sahlan oo lagu xalin karo dad aan lahayn khibrad gaar ah. Nidaamka computer-ku-xisaabinta xisaabinta ayaa sidoo kale isticmaala barashada mashiinka si loo kordhiyo dadaalka aadanaha.
Cilmi-baarista bulshada, mashaariicda xisaabinta bini'aadamka ayaa u badan tahay in loo isticmaalo xaaladaha ay cilmi-baadhayaashu rabaan inay kala soocaan, codeeyaan ama ku calaamadiyaan sawirrada, fiidiyowga, ama qoraallada. Qeybahaas badanaa maaha wax soo saarka cilmi-baarista; halkii ay ka yihiin alaabta ceeriin ee falanqaynta. Tusaale ahaan, dadka intiisa badan - cod-bixinta siyaasadeed ayaa loo isticmaali karaa iyada oo qayb ka ah falanqaynta ku saabsan socodka doodda siyaasadeed. Noocyada noocyada kala duwan ee microtasas waxay u badan tahay inay u shaqeeyaan marka ugu fiican marka aysan u baahnayn tababar gaar ah iyo marka ay jiraan heshiis ballaadhan oo ku saabsan jawaabta saxda ah. Haddii hawsha kala-saariddu ay tahay mid sir ah - sida "Sheekadani miyaa sheekadu?" - ka dibna waxay noqoneysaa mid sii kordheysa oo muhiim ah in la fahmo cidda ka qaybqaadata iyo waxa ay ku dhejiyaan. Dhamaadka, tayada wax soo saarka mashaariicda xisaabinta bani'aadamka waxay ku salaysan tahay tayada wax soo-saarka ee ka qaybgalayaasha bani'aadamku bixiyaan: qashinka, qashinka.
Si aad u sii dhisto dareenkaaga, jaantuska 5.1 ayaa tusaya tusaalooyin dheeri ah oo ku saabsan sida xisaabinta loo adeegsado cilmi baarista bulshada. Jadwalkani wuxuu muujinayaa in, marka loo eego Galaxy Zoo, mashaariic badan oo kale oo lagu xisaabtamayo bini'aadamka waxay isticmaalaan suuqyada shaqaale ee microtask (tusaale ahaan, Amazon Mechanical Turk) waxayna ku tiirsan yihiin shaqaalaha mushaharka ah halkii ay ka heli lahaayeen mutadawiciin. Waxaan ku soo laabanayaa arrintan ka qaybqaadashada dhiirrigelinta markaan bixinayo talo ku saabsan sameynta mashruuc wada shaqeyneed.
Shaxda 5.1: Mabaadi'da Mashaariicda Xisaabinta Dadka ee cilmi baarista bulshada
Caddeynta xisbiyada siyaasadeed Qoraalka Suuqa shaqada ee miyir-doorsoonida Benoit et al. (2016)
Ka qaad macluumaadka dhacdooyinka mawduucyada wararka ee ku saabsan Mucaaradka Shaqada ee 200 oo magaalo oo Mareykanka ah Qoraalka Suuqa shaqada ee miyir-doorsoonida Adams (2016)
Iskuday maqaallada wargeysyada Qoraalka Suuqa shaqada ee miyir-doorsoonida Budak, Goel, and Rao (2016)
Ka qaad macluumaadka munaasabadda laga soo duubay xusuus qorka askarta dagaalkii Dunida 1aad Qoraalka Tabaruciin Grayson (2016)
Soo ogow isbeddellada khariidadaha Sawirro Suuqa shaqada ee miyir-doorsoonida Soeller et al. (2016)
Hubi codsiga algorithmic Qoraalka Suuqa shaqada ee miyir-doorsoonida Porter, Verdery, and Gaddis (2016)